March 2010 – Samaya समय's Blog
Samaya समय's Blog
Words with the speed of time …
किन यस्तो हुन्छ मलाई, बुझ्न सक्दिन
March 29, 2010 May 20, 2010 Samaya समय Leaveacomment
तिमीलाई म के भनुँ, भन्न सक्दिन
नराम्रो खबर तिम्रो बारेमा, सुन्न सक्दिन
मन जल्छ सम्झनाको पिरलोले, निभाउन केही हुँदैन
तिमी बिना अरु कसैको बोलीले, यो मन छुँदै छुँदैन
कोल्टे फेरेर रात बिताउनु छ यहाँ, सपनाको छेउ हुँदैन
दुखेको मनको सपना, रात बित्छ निंद्राले छुँदै छुँदैन
एक्लो भएर यस्तो लाग्छ होला, मनको कुराको भर हुँदैन
साथ कसैको भएकै भए पनि , सम्झनाले मन छुँदैन
एक्लो हुनुमा पनि बेग्लै आनन्द, एक्लै नभए संभव हुँदैन
जिन्दगीमा सधैँ अँध्यारो देखिन्छ, टाढाको उज्यालोले छुँदैन
©Copyright protected by Samaya समय, 2010.
सोझो मान्छेको लागि त संसारै होइन रहेछ
March 25, 2010 March 25, 2010 Samaya समय Leaveacomment
म त सोझो मान्छे, कसैले बाङ्गो बनाउने प्रयास गरे
बाङ्गिन मैले नसकेपछि ती मान्छे आफैँ पछाडि सरे
कति देखेँ मैले पनि बजारका अनगिन्ति हाउभाउहरू
अर्काको काँध चढि आफु शिखर छुने हजारौँका दाउहरू
बाटोमा यात्रा गर्दा पनि देखि सहन्नन् कसैले आजकल
ढोङ्ग रच्ने सजिलो रङ्गमञ्चका पात्र रहेछन् सबै नाउँहरू
खुशी र उमङ्गको अनुभव गर्न पाउनु त सपनाको कुरा भयो
आफ्नो गाँसमा पसिना मिसिँदा कसैको सौखिन सोच पुरा भयो
जति नै मेरो चर्चा गरियो त्यति नै गरिन्छ अरुको आजकल
फगत एक युग बित्यो, सोझो मान्छेको लागि त्यो युग शून्य भयो
एकाएक आँखा खुल्दा साथमा तिमी भेटेँ
March 24, 2010 April 10, 2010 Samaya समय Leaveacomment
किन होला तिम्रो त आजकल बोली पनि मीठो
यति मीठो बोली हुने साथी कहाँ देखेँ
खुशी हुँदा बेग्लै कुरा रीसाउँदा रीसै पनि मीठो
सायद मेरो भाग्य राम्रो तिम्रै साथ भेटेँ
एक्लै एक्लै डुल्दा डुल्दै तिमीलाई भेटेँ
भेटेपछि आफ्नै लाग्यो सपनीमा देखेँ
रम्न खोजेँ आफैँ त्यो सपना भित्र
तिम्रा हरेक कदममा आफु संगै देखेँ
तिम्रो साथ नछुटोस् भनी एउटा गीत लेखेँ
तिम्रो मनको भावना मेरो संग गाँसेँ
के जादु गरेकी छौ तिमीले म माथि
March 23, 2010 March 31, 2010 Samaya समय 1 Comment
किन होला तिम्रो माया धेरै धेरै लाग्छ
तिमीलाई भेटेपछि मनमा खुशी जाग्छ
एक्लै बस्न मन लाग्थ्यो पहिले पहिले
हरपल तिमी खोज्छ यो मनले अहिले
जब हुन्छ्यौ तिमी साथ मन चङ्गा हुन्छ
तिम्रो खुशी नहुँदामा यो मन एक्लै हुन्छ
बाटोभरि तिमी तिमी जताततै तिमी
अँगालोमै बेरिरहूँ मनमै बस तिमी
अब नजाऊ तिमी टाढा एक्लै बस्नु हुन्न
त्यो मन एक्लै बनाएर यो मन खुशी हुन्न
चल्छ यहाँ भित्र भित्रै छुरा
March 23, 2010 March 24, 2010 Samaya समय 1 Comment
चाहेका सबै कुरा कहाँ हुन्छन् यहाँ पुरा
जब चल्छन् बिना कारण भित्र भित्रै छुरा
एउटाले सपना देख्दा अर्को जब आह्रीस गर्छ
सपना टुट्छ र चल्छ यहाँ भित्र भित्रै छुरा
हट्छन् मेरा बाधा सबै भनेर देउतै भाके पनि
छोड्दैन यहाँ चल्न त्यसै भित्र भित्रै छुरा
भलो चिताउने जमाना त अर्कै संसार पुगिसक्यो
अब हुन्न केही यहाँ चल्छ केवल भित्र भित्रै छुरा
देख्नु र सुन्नुमा फरक त हुन्छ नै भ्रम होइन केही
तर कसैको केही लाग्दैन चल्छ यहाँ भित्र भित्रै छुरा
मायाको भीख माग्दै एक दिन पनि कसैको पछि परिएन
March 18, 2010 March 24, 2010 Samaya समय2Comments
आजकल केही आउँदैन मनमा तिमीलाई सम्झेर होला
कुनै दिन हुन्नथ्यौ तिमी सम्झनामा मैले भूलेर होला
खै के भनौँ यो सम्बन्धलाई आज मैले भन्न जानिनँ
कतै आफैँ हराउने बहानामा मैले तिम्रो मन त तानिनँ
यस्तै रहेछ संसार अनि संसारभित्रका मान्छेहरू पनि
कोही आउँछन् हल्ला फैलाउँदै अनि जान्छन् केही नभनी
धेरै आए जिन्दगीमा कसैलाई आफ्नो भन्ने चेष्टा गरिएन
मोबाइल फोन (लघुकथा) -समय (२०६६/११/१९, बुधबार)
March 13, 2010 March 24, 2010 Samaya समय2Comments
आज एक्कासी एउटा कल आयो मेरो मोबाइलमा। मैले फोन उठाएँ। अचम्म लाग्यो! कुरा गर्दागर्दै टावर उड्यो। के देख्नुपरेको, के भोग्नुपरेको! शायद, आज पनि लोडशेडिङ्गको लोड धेरै भएरै होला। करीब आधा घन्टापछि मैले फेरि कल ब्याक गरेँ त्यही नम्बरमा जुन नम्बरबाट मलाई कल आएको थियो। उता फोन रिसीभ भयो, तर अपरिचित आवाज! हैन के सुन्नुपरेको! हुन पनि हुनसम्मै अचम्म हुन थालेको छ आजकल।
अब कल होइन एस एम एस आयो। तपाईँलाई आज मैले जसरी भए पनि भेट्नै पर्ने काम छ। तपाईँको टाइम कस्तो छ? अब मैले त्यो एस एम एस को रिप्लाइ पठाउनु जरूरी ठानिनँ। म आफ्नै काममा लागेँ। कतै नभएको अचम्मको मान्छे!, एकछिनपछि अर्को एस एम एस आउँछ। होइन, आज के विधि अचम्म भएको यो! म त आफैँ सोच्न थालेँ यहाँ बेरोजगारहरूको सङ्ख्या कति होला! रोजगार भए त बेकारमा अरुलाई नचाहिँदो कल गरेर, एस एम एस पठाएर आफ्नो समय बर्बाद गर्ने चाहना कस्को हुन्छ होला र!
आफू समयमा काम नसकिएर दिक्क भएको छु। यहाँ कुनै काम समयमा हुन्न। झन् यो मोबाइल बोकेपछि त अर्को काम थपियो भन्या! फोन कल उठाउने, एस एम एस रिसीभ गर्ने, के के हो के के, भनेर साध्य छैन। फेरि CRBT पनि के के राख्न सकेका हुन्! सुनेरै बस्नुपर्ने पुरै Ring नबजिकन कल उठ्यो भने त भाग्यमानी कलर मान्नुपर्छ आफूलाई। नबोकी पनि नहुने, बोके पनि नहुने, काठ्मान्डुको खाल्डोमा मोबाइल फोन!
कहाँ देखुँ म … [गीत]
भेटिन्छ कि मन मिल्ने साथी … (गीत)
जुनी-जुनी भरिलाई … [गीत]
घडि हेर्छु …(गीत)
My Love Forever … [गीत]
IMAGE GROUP OF MEDIA